Sidee loo abuuraa Xirfadaha Diiwaanka Dijital ah? - ITS Tech School
Shaqo iyo dhisid xirfad ayaa ah laba waxyaabood oo kala duwan, waxaan waydiisanayaa jaangooyada, dadka shaqeeya, taageerayaasha xirfadaha, dhalinyarada shaqo la'aanta ah inay mar walba cad yihiin - haddii ay raadinayaan Job ama Career? "Shaqo" waxaad noqon kartaa xafiis ama aad qabanayso shaqo waqti xaddidan iyo maalin kasta oo aad sameeyneyso isla markaana aad ka heli karto inaad hesho waxoogaa lacag ah. Laakiin "Shaqo" Ma waxaad sameyneysaa shaqo aad jeceshahay oo aad ku heshay abaalmarin waxayna ku siineysaa fursad aad ku koro oo aad u korodho. Sababtoo ah waxaan jeclahay shaqada, waxaana doonayaa in aan isku meel u dhiso. Kumbuyuutarka Suuq-geynta wuxuu bedelay nolosha shirkado badan.
Iyo maanta dunida aduunka warbaahinta, haddii aad rabto in aad shaqo sameysato ama aad dhisato xirfadaada taas oo sahlan marka la barbar dhigo. Sababtoo ah Dunida Digital waxaan haynaa xog aad u weyn aduunka oo dhan. Haddii aad tahay dhalinyaro aan shaqeynin, Guri-joogta, ardayga jaamacadda, dukaanka ama ganacsadaha waxaad u baahan tahay inaad noqoto rakibaad dijital ah si aad u iibiso ama u bixiso adeegyada.
Awoodda Suuq-galka Dijital ah
Flipkart waxaa lagu aasaasay 2007 iyada oo la adeegsanayo farqiga shaqaale iyo adeegyo xaddidan - hadda waxay leeyihiin shaqaale 30000 iyo wareegtada Rs. 15,129 waxay dardar geliyaan, waxayna ku iibiyaan alaabtooda iyada oo loo marayo warbaahinta dijital. Blogs - Amit Agrawal oo daabacaya barta internetka ee www.labnol.org oo kasbado Rs. 20 lacs oo ku socda 30 lacs bishiiba kaliya iyada oo loo marayo blogyada IT-ga. Waa awoodda warbaahinta Dijital ah in qofku helo dakhli la wadaagayo aqoonta.
Sidaas darteed haddii aad horay u maqnayd baska xirfadda - ma ahan in la ogaado sababtoo ah halkan waxaan ku xalinaynaa farsamooyinka casriga ah ee casriga ah ee ku siinaya inaad ku biirto kooraskayaga. Suuqgeynta Muuqaalka Dijital ah, waxaan kugu dhisi doonaa si aad u awood badan leh aqoonta warbaahineed ee digital-ka ah oo aad qorsheyn kartid abuurista bogagyo, qorsheeynaya ololeyaal suuq geynaya, suuq-geynta warbaahinta ee macaamiishaada ama badeecadaha shirkaddaada, Kordhi ganacsigaaga adoo adeegsanaya suuq-geynta warbaahinta dijital ah adoo adeegsanaya facebook, Instagram.
Xirfadda suuq-geynta suuqa waxay ugu fiican tahay guriga (shaqooyinka guriga, guriga ka shaqeeya) sababtoo ah waxaan fahamsanahay in kuwa guryaha leh ay leeyihiin masuuliyadahooda sida qoyska, caruurta, hawlaha guriga iyo wax badan oo badan, laakiin ha ka welwelin adduunyo dijital ah maaha inaad khasaariso tayadaada , Kumbuyuutarka suuq-geynta daabacaadda ee Digital ayaa kaa caawin doona inaad heshid aqoonta aasaasiga ah ee aad ku dardar-gali karto ganacsiga degaanka, waxaad kobcin kartaa xiisahaaga, waxaad ku qori kartaa blogyada cuntada, sidaad u daryeeli lahayd carruurta, casharo yar oo mawduucaaga ah. Fursado badan ayaa adiga kuu ah - maxaad sugeysaa inaad ku biirto - Koorarka suuq-geynta digital oo tusto tayadaada xubin ka tirsan qoyskaaga.
Dukaameystayaasha / Ganacsatada / bilawga - Dhibaatooyinka ugu weyni waxay ka yimaadaan ciddii u shaqaaleysiin karta kumbuyuutarrada warbaahinta dijital ah ee naftooda, sida loo dabagalo waxa ay sameynayaan, ma sameeyaan sax ama ma aha, waxa noqon doona ROI ee suuq geynta, waxan helayaa wax faa'iido ah ama aan ahayn - haa, waxaa jira su'aalo badan oo aan la aqbali karin, waxay ubaahantahay inaanad walwal gelin - kaliya saacado yar oo ka timaad waqtigaada oo baro suuq-geynta warbaahinta dijital ah, khabiirkayagu wuxuu fahmi doonaa ganacsigaaga oo kaa caawin doona sidii aad u dhisi lahayd istiraatiijiyad ah suuq-geynta.
Dhallinyarada aan shaqeynin - Kombiyuutarada had iyo jeer waa xirfad faa'iido leh, laakiin dhibaatadu waxay timaaddaa marka aanad ku baranin kombiyuutarada shahaadada, sidaas darteed uma baahnid inaad walwaliso - haddii aad baranayso kombiyuutarada aan maadooyinka ahayn sida BA, BCOM, BSC iyo wali waxay doonayaan inay ku dhisto xirfad ku shaqeeya Kumbuyuutarrada, halkaan waxay fursad kuu siinaysaa inaad sidaas samayso. 1000s of shaqeeyaan jiifsan kuwaas oo raadinaya xirfadlayaasha suuq geynta, ku biir our Koorsada suuq-geynta daabacaadda warbaahinta in ay leeyihiin xirfad horumarineed ee suuq-geynta warbaahinta saxaafadda.
BBA / MBA / xirfadle shaqo ee suuq-geynta - waad ogtahay inta ay ku adag tahay in la abuuro hogaamiye kulul ee suuqa, sida ay u adag tahay in la sharaxo waxtarka alaabta, sida ay u adagtahay in macaamiishaada u adeegto adeegyo, waana hubnaa inaad u isticmaasho PowerPoint, bandhigyada, emailka, wacitaanka qabow, albaabka si aad u ogaatid ciddii macaamiisha ah, juqraafi ahaan, kooxdayada da 'ahaan, jinsiga, awoodda bixinta iyo waxyaalla badan, iyo haddii aan ku siin karno ikhtiyaari annagoo ku siinayna xayeysiis xayeysiin ah u sheeg koox ahaan asbuuciiba - ma u malaynayso in ay noqon doonto GREAT! Haa, waxaa suurtagal ah in adduunka warbaahineed ee dijital ah, hadda waxaad u maleyneysaa waxa aad sameyneyso, shaqo adag ama shaqo farsamo.
Ku guuleysato GOAL-yada adigoo baranaya marketing Digital laga bilaabo xalalka casriga ah ee casriga ah.
Waa maxay sababta WiFi-gaaga loo Nooleeyo iyo Sida loo Xaqiijiyo?